Posted by ကို Tranquillus | 31 ပင်လယ်, 2018 | ရေးသားပါးစပ်ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှု
အဆိုပါဗော်တဲယားစီမံကိန်းသင်တဖြည်းဖြည်းသင့်ရဲ့စာလုံးပေါင်းတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီမယ့်စိတ်ကြိုက်လေ့ကျင့်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်ပွငျသစျထဲတွင်ထူးချွန်၏လူတယောက်အဆင့်ကိုရောက်ရှိဖို့စေရန်ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်း၏အဓိကအားသာချက်ကထိထိရောကျရောဘာပဲသင့်စတင်အဆငျ့သင်လေ့ကျင့်မည်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ယင်း၏အကြောင်းအရာ၏စည်းစိမ်မှကျေးဇူးတင်ပါသည်, ဒီကိုယ်ပိုင်လေ့ကျင့်ရေးသင်ကျော်ကြားတဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးရမှတ်ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကိုကိုယ်တော်တိုင်ဗော်တဲယားအဆိုပါလက်မှတ်များထုတ်ပေးအေဂျင်စီများကအကြံပြုကြောင်းသတိပြုရပါ! ဤသည်မူရင်းနှင့်ဆန်းသစ်ပလက်ဖောင်း သို့ဖြစ်. သင်၏စာလုံးပေါင်းကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းပေးထားပါတယ်။ ဒါဟာသင်နေတုန်းပဲနည်းနည်းလူသိများထူးခြားတဲ့သင်ယူမှုနည်းပညာပေးအပ်နေစဉ်။ ဒါဟာ "ကျောက်ဆူးအောက်မေ့ဖွယ်" ဟုခေါ်နှင့်သင့်မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်များများပြားရည်ရွယ်သည်။
ကျနော်တို့ပြင်သစ်ဘာသာစကား၏အကောင်းတစ်ဦး command ကိုအမြဲသငျသညျကိုငှားရမ်းရန်အလုပ်ရှင်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်အားသာချက်ကြောင်းကိုသတိထားမိဖြစ်ရမည်။ ထိုအစာအရေးအသားသည်သင်၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟုတ်ပါဘူးလျှင်ပင်, သင်ဆဲညာဘက်ထိုသို့ပြုမှသိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ရပ်စဲ၏စာတစ်စောင်ရေးလိုက်, ဒါမှမဟုတ်ဥပမာအစည်းအဝေးတစ်ခုအစီရင်ခံစာပေးပို့ရန်။
သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အစာဖြင့်ရေးသားဆက်သွယ်ရေးနှင့်အတူတိုက်ရိုက်ဆက်ဆံရေးမျိုးကပါဝင်ပတ်သက်လျှင်တာဝန်ပင်အစွမ်းရှိ၏။ ထိုသို့ကဒီကဏ္ဍအားလုံးတွင်အတော်များများအလုပ်အကိုင်များအတွက်အမှုကြောင်းရှင်းပါတယ်။ အမြော်အမြင်ရှိရှိMolièreများ၏ဘာသာစကား၏နူးညံ့သိမ်မွေ့သောသဒ္ဒါကို အသုံးပြု. အပေါငျးတို့သခြားနားချက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်မှန်ကန်စွာရေးသားဖို့ကိုဘယ်လိုသိကြ၏။
အခြို့သောစကားများအနည်းငယ်ပိုမှန်ကန်စွာရေးသားနိုင်ရန်ထင်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ကောင်းသောပြင်သစ်သင်တန်းကိုလိုက်နာဖြစ်ကောင်းနေ့စဉ်ညွှန်းများအသုံးပြုမှုဆန့်ကျင်မြေပြင်ရရှိမှုစာပို့တဲ့အခါအချိန်ကအရေးပါဖြစ်လာနေသည်။ ယင်းဗော်တဲယားစီမံကိန်းခြင်းဖြင့်အွန်လိုင်းပေးအထူးကြပ်မတ်လေ့ကျင့်ရေးအောက်ပါပြင်သစ်သဒ္ဒါ၏အခြေခံများကိုပြန်လည်ရှာဖွေရန်အတွက်။ အများဆုံးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစာလုံးပေါင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသင်တို့အဘို့အဘယ်သူမျှမလျှို့ဝှက်ချက်ကိုရပါလိမ့်မယ်။
သင်၏စာလုံးပေါင်းမှတ်ဥာဏ်ကိုမြှင့်တင်ရန် e-learning ညွှန်ကြားချက်နှင့်တော်လှန်ရေးနည်းပညာများဖြင့်အမျိုးမျိုးသောအမှားများကိုနှုတ်ဆက်ဖို့ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်စုစုပေါင်း syntax အမှားဖြစ်စေ၊ ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ဖြတ်ခြင်း၏ရိုးရှင်းလွယ်ကူမှုဖြစ်စေဖြစ်စေ Memorandum Anchoring သည်စာလုံးပေါင်းကောင်းများကိုအဆက်မပြတ်သုံးစွဲရန်အများဆုံး mnemonic နည်းလမ်းများပေးရန်ရည်ရွယ်သောသင်ကြားရေးနည်းစနစ်ဖြစ်သည်။
Voltaire Project သည်ဒဏ္legာရီပြိုင်ဆိုင်မှုတွင်အောင်မြင်ရန်သင့်လက်ထဲရှိကတ်အားလုံးကိုသင့်အားပေးရန်ဖြစ်သည်။ ပလက်ဖောင်းမှပေးသောသင်တန်းကိုအလေးအနက်လိုက်နာခြင်းဖြင့်စကားလုံးတစ်လုံး၏စာလုံးပေါင်းကိုသင်ဘယ်တော့မှတွန့်ဆုတ်မည်မဟုတ်ကြောင်းထင်ရှားသည်။ မကြိယာ၏ conjugation အပေါ်။ သင်၏အဆင့်ပေါ် မူတည်၍ သင်၏စာမေးပွဲတွင်အမှတ်ကောင်းကောင်းရရန်နှင့်ဗော်တဲယားအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရန်ပြည့်စုံသောလေ့ကျင့်မှုမှသင်အကျိုးခံစားရလိမ့်မည်။
အချို့သောလူများအတွက်, ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားနှင့်တူ၏။ ပြင်သစ်စာလုံးပေါင်းအပေါငျးတို့သအသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုအပြစ်တင်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုများစွာသောဖြင့်များစွာသောအမှားတွေနေသော်လည်း, ဗော်တဲယားစီမံကိန်းနည်းပညာ၏ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းမှာသင်ကြားရေးလွတ်ကျက်နည်းလမ်းများနှင့်ငါတို့ကိုပေးသည်။
ပလက်ဖောင်းအားဖြင့်ကတိထားတော်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုရုံလူတိုင်းစေသည်ဘုံအမှားတွေကိုရပ်တန့်မထားဘူး။ သူတို့ရဲ့ကျောင်းသားများကိုအပေါင်းတို့ထက်ထူးချွန်အောင်မြင်ရန်ပညာရေးနှင့်အတူလိုက်ပါသွားကြသည်နှင့်မျှမပုပ်ဓာတ်ကိုလည်းနှမြောပါလိမ့်မည်။ သဒ်ဒါ, လွန်းသည်, မိမိရာထူးများအတွက်ကြာပါသည်။ အဆိုပါဗော်တဲယားစီမံကိန်းဥပမာမမှန်ကြိယာ၏တင်းမာနေမှာမှားလိမ့်မနည်းနည်းလုံးကိုအထိရောက်ဆုံးအကြံပေးချက်များအားဖြင့်အနည်းငယ်သာ, ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးတယ်။ အလုပ်ခွင်ထဲမှာထွက်မတ်တပ်ရပ်မှကောလိပ်ကျောင်းမူပိုင်ခွင့်များအဆင့်တစ်ဦးကရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်း။
အဆိုပါဗော်တဲယားစီမံကိန်းပြည့်စုံသောအွန်လိုင်းလေ့ကျင့်ရေးပေးထားပါတယ်။ ဒါဟာကွာဟချက်ကိုဖြည့်ဖို့နှစ်ဦးစလုံးတော်လှန်ရေးသမားထင်ရပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်လည်းနောက်ကျောကိုသင်စေပြီတိုးတက်မှုကနေခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အသစ်သောလေ့ကျင့်ရေးကမျးလှမျးခကျြအကယ်စင်စစ်ပိုမိုရှုပ်ထွေးစာကြောင်းများရှိသမျှကိုအလှည့်နှင့်အတူပြန်လည်သင့်မြတ်ပါလိမ့်မယ်။ အရာအားလုံးကိုသင်ကပြိုင်ပွဲများတွင်ဂုဏ်ထူးဆောင်မှတ်စုတက်ကောက်ဖို့ခွင့်ပြုအကောင်အထည်ဖော်နေသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုသင်တန်းတစ်ခုချင်းစီကိုကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းအခြေခံစာလုံးပေါင်းကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်အကဲဖြတ်ရန်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဗော်တဲယားစီမံကိန်းထို့ကြောင့်တစ်ခုတည်းကိုးကားအတွက်ထူးချွန်၏ပြီးပြည့်စုံသောပညာရေးလေ့ကျင့်ရေးနှင့်အာမခံချက်ပေါင်းစပ်။ သူ့ဟာသူအဖိုးတန်လက်မှတ်များထုတ်ဝေထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအကြံပြုသည်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွင်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဂုဏ်သတင်းရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်သင်ယူသူလက်၌ရှိသမျှသော tools များနေ့စဉျတိုးတကျအောငျနှင့်အဆက်မပြတ်အသစ်သောအမှုအရာကိုသင်ယူရန်။
စာစီစာရိုက်ခြင်း၏အခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုသိရှိခြင်းသို့မဟုတ် pleonasm ကိုခွဲခြားသိနိုင်ခြင်းသည်ထူးခြားသောစွမ်းရည်များမဟုတ်ပါ။ ဤအရာကိုနားလည်ထားပါကသူတို့သည် Voltaire Certificate ရရှိရန်သင့်အတွက်အသုံးဝင်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းနားလည်ထားပါ။ ရိုးရိုးအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကသင်အထက်တွင်ရမှတ်များများရရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ စာလုံးပေါင်းအမှားနည်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်သင်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘ ၀ တွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ role မှပါ ၀ င်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကောင်းစွာသိသည်။ အထူးသဖြင့်သင်သည်မကြာမီအလုပ်တစ်ခုလျှောက်ရန်ရှာနေလျှင်။
ဖတ်ရန် အစည်းအဝေးမှတ်စုယူခြင်း, အကြံပြုချက်များကိုထိရောက်သောဖြစ်
ဗော်တဲယားစီမံကိန်းကနေအကူအညီဖြင့်ဝယ်ယူဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုသင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အပေါ်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့လိုင်းကိုထည့်သွင်းဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျရှာဖွေစုဆောင်း၏မကျြမှောကျ၌အားသာချက်တစ်ခုသေချာပေါက်ပါလိမ့်မယ်မသံသယရှိပါတယ်။ စိုးရိမ်ခြင်းမရှိသောအမှားတွေနဲ့လေယူလေသိမ်းအမှားအယွင်းများသို့မဟုတ်လျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလို adjective နာမဝိသေသနဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတာနဲ့သင်ကသင်၏နောက်သူဌေးအထင်ကြီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်ဧကန်အမှန်အပိုကောင်းအလိုအလျောက် corrector စစ်ဆေးစာလုံးပေါင်းရန်သင့်စွမ်းရည်အားဖြင့်ယစ်လိမ့်မည်။ သင်ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ရာထူးသို့သငျသညျကြိုဆိုပညာရှိတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယူထားပါတယ်အစကတည်းကထံမှယုံကြည်ကိုးစားမှုပေးကြဖို့အခွင့်အလမ်းပေးတော်မူမည်ကြောင်းအဓိကကျွမ်းကျင်မှု။
အဆိုပါနာမည်ကြီးစာလုံးပေါင်းပြိုင်ပွဲသည် Project မှဗော်တဲယားကိုသင်ရထား မေလ 14th, 2020Tranquillus
လွန်ခဲ့သောသင်၏စိတ်ဓာတ်ကို Elephorm Video Training ဖြင့်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပါ